Ndị a bụ 5 nke kacha mma eReaders ị nwere ike ịzụta | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ ndị ọrụ na-anụ ụtọ akwụkwọ na usoro dijitalụ site na eReader ma ọ bụ akwụkwọ elektrọnik, na-erite uru site na ọtụtụ uru ya. Na mgbakwunye, yana ọfụma ka oge na-aga, anyị ahụla ka ọtụtụ ngwaọrụ dị maka ire ere ịhọrọ site na, ọ bụ ezie na nnukwu onye ahịa ahịa a ka bụ Amazon, nwere ọtụtụ eReaders dị iche iche ịhọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ eReader, taa anyị ga-enye gị aka ịme ya yana ọkachasị ịhọrọ nhọrọ nke ngwaọrụ. Maka nke a, anyị ga-egosi gị n'isiokwu a 5 nke kacha mma eReaders ị nwere ike ịzụta taa n'ahịa.
Dị ka anyị kwurula, Amazon bụ isi ihe ngosi nke ahịa a, na ihe atụ nke a bụ na n'ime ndepụta a, anyị ga-ahụ ngwaọrụ 3 sitere na ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri. Eleghị anya anyị gaara enwe ohere maka ụdị ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta ezigbo eReader nke na-enye anyị nsonazụ kachasị mma, anyị agaghị echefu ngwaọrụ ọ bụla nke Amazon.
1 Ọdịdị Omenala
3 Ihe Ndabere
4 Ike eReader Pro HD
5 Obi iru ala
Ọ bụrụ na anyị ga-edebe eReader kachasị mma nke dị ugbu a n'ahịa, ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọrụ ga-anọnye nke a. Ọdịdị Omenala. Amazon anọwo na-emeziwanye ngwaọrụ ya, ruo mgbe anyị ruru Nke a na n'echiche anyị dị obi umeala na-ezughị okè, ọ bụ ezie na ọnụahịa ya ka na-anọghị n'ihe ọtụtụ n'ime anyị dị njikere ịkwụ.
A na-ere ya ugbu a n'ahịa na ọnụahịa nke euro 289.99 Nke ahụ nwere ike iyi ihe dị elu, ma ọ bụ, mana na ịzụrụ Kindle Oasis, anyị agaghị enwe naanị ngwaọrụ kachasị mma n'ahịa, mana anyị ga-enwe eReader nke ga-adịgide anyị ma ga-ejere anyị ozi ruo ọtụtụ afọ ịnụ ụtọ dijitalụ ogugu.
N'okpuru ebe anyị na-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa a Oasis Kindu;
Kobo bụ onye ọzọ n'ime ndị egwuregwu dị egwu na ahịa ọgụgụ dijitalụ na ọ jisiri ike merie ịchịisi Amazon site na mwepụta nke ngwaọrụ ndị na-adọrọ mmasị dị ka nke a Kobo Aura HD H2O. A mara ọkwa mmalite nke eReaders ọhụrụ n'oge na-adịghị anya, ọ bụ ezie na ngwaọrụ a bụ ọkwa ya ugbu a na ahịa.
Ndị a bụ Kobo Aura HD H2O isi atụmatụ na nkọwa;
Akụkụ: 175,7 x 128,3 x 11,7 mm
Ngosipụta: 6,8-inch Pearl E Ink na-emetụ WXGA + na 265 ppi, na mkpebi nke 1440 x 1080px
Arọ: gram 240
Ebe nchekwa dị n'ime: 4 GB gbasaa site na 32 GB Micro SD kaadị
Njikọta: WiFi na Micro-USB
Batrị nwere obodo kwụụrụ onwe ya ruo ọnwa abụọ
Formatsdị akwadoro: eBooks: EPUB, PDF na MOBI
Ngwunye ComfortLight sistemụ ọkụ nwere ezigbo ihe mkpuchi na-eguzogide ọgwụ
Imirikiti eReaders kachasị mma n'ahịa dị oke ọnụ, mana enwekwara ngwaọrụ ndị dị mma dị ka nke a. Ihe Ndabere, na ọnụego belata. Anyị nwere ike ikwu maka nke a Amazon Kindle na ọ bụ akwụkwọ elektrọnik zuru oke maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ọtụtụ ọrụ na ọ bụghị nhọrọ, yana ndị chọrọ ịnụ ụtọ ịgụ ihe.
Site na mmeghari ohuru a dị ugbu a, Amazon nyere ya ike na arụmọrụ ọhụrụ, nke eme ka o zuo oke maka ugwo o nwere, di ugbu a na 79,99 euro. Cheta tupu ikpe ikpe a electronic akwụkwọ maka ya price na adịghị arịọ maka ìhè ma ọ bụ ọrụ nke ngwaọrụ ndị na-uru abụọ.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwapụta nke isi ihe a;
Akụkụ: 169 x 119 x 10,2 mm
Arọ: gram 191
Ngosipụta 6 ″ (15,2 cm) Amazon na E Ink Pearl technology, 167 dpi, kachasị font technology na 16 isi awọ
Esịtidem nchekwa: 4 GB na-enye gị ohere ịchekwa karịa 2.000 eBooks, ọ bụ ezie na ọ ga-adabere na nha nke ọ bụla nke akwụkwọ
Nchekwa igwe ojii: free na-akparaghị ókè maka ọdịnaya Amazon
Ike eReader Pro HD
The Spanish ika Energy Ssistem nwere nnukwu ahụmahụ na dijitalụ ọgụgụ ahịa. Ruo ọtụtụ afọ, ọ malitela ọtụtụ akwụkwọ eletrọniki nke wetaara ya ụfọdụ karịa ọnụ ọgụgụ ahịa na-atọ ụtọ. Ugbu a, ha ulo oru Ike eReader Pro HD, na-achọ ihe ịga nke ọma na karịa ihe niile iji guzoro na nnukwu ahịa,
Ha ejikwala ike ịzụlite na imepụta eReader nwere oke ike yana karịrị atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị anyị ga-enyocha n'okpuru:
Akụkụ: 159 x 118 x 8 mm
Ihuenyo: mgbochi 6? E-ink Akwụkwọ Ozi HD ink kọmputa na ọkwa 16 nke isi awọ na mkpebi nke 758 x 1024 pikselụ na 212 dpi
Ebe nchekwa dị n'ime: 8 GB gbasaa ruo 128 GB site na kaadị microSD / SDHC / SDXC
Njikọta: WI-FI 802.11 b / g / n
Batrị 2.800 Mah, nnwere onwe nke ọnwa abụọ
Formatsdị akwadoro: ebook: txt, pdf, epub, fb2, html, rtf, chm and mobi
N'ikpeazụ na imechi ndepụta a anyị ga-ezo aka ọzọ na ngwaọrụ Amazon. Anyị na-ekwu maka ya Obi iru ala, nke mbụ eReader mbụ eReader kwalitere na ahịa site na ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri na nke oge na-aga anyị ga-edebe ya ntakịrị tupu Kindle Oasis nke anyị kwurula banyere ya.
Amazon lebara njem ụgbọ mmiri a anya nke ikpeazụ, na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ zuru oke, ọ bụghị naanị na nhazi, kamakwa na nhọrọ na arụmọrụ ọ na-enye anyị. Ya price bụ otu ugboro ọzọ a na-adịghị mma akụkụ na ọ na ugbu a ahịa na ahịa nke 189.99 euro. N'ezie, dị ka anyị kwurịtara na Oasis, itinye ego dị mkpa ọ bụ ezie na enweghị ike ịgbagha agwa ya yana site n'inweta nke a, anyị ga-enwe eReader ogologo oge.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwapụta nke a Kindle Voyage;
Ezigbo ọkụ na ihuenyo dị elu nke ga-eme ka anyị gụọ n'ụzọ dị mma ma dị mma
Zụta ihe eReader na nso nso a ghọrọ ọrụ dịtụ mgbagwoju anya n'ihi na enwere ọtụtụ ngwaọrụ dị, nke nwere oke ọrụ na arụmọrụ. Anyị ka gosipụtara gị ndụmọdụ anyị, mana anyị ka ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ ka ị nwee ike ịbụ eziokwu mgbe ị na-azụ akwụkwọ ntanetị gị ọzọ ma ghara ịkwa ụta maka ịzụta ahụ.
Ọ bụrụ na ị ga-eji eReader gị gụọ kwa ụbọchị ma na-aga n'ihu n'ihu, ndụmọdụ anyị bụ ka ị na-etinye ego gị na ngwaọrụ nke enweghị obi abụọ dị ka ndị anyị hụrụ na isiokwu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmara na ịgaghị eji ya nke ukwuu na ị ga-agụ ya n'ụzọ doro anya, anyị ga-akwado ka ị ghara itinye nnukwu ego, agbanyeghị na a ga-eme mkpebi ikpeazụ site n'aka gị.
Na mgbakwunye, ị ga-ahụrịrị nke ọma ma ọ bụrụ na nke gị bụ ọgụgụ dijitalụ ma ọ bụ na ọ ka hụrụ akwụkwọ n'anya n'ụdị akwụkwọ. Enwere ọtụtụ ndị ọrụ, mgbe ha zụrụ ihe eReader, na-achọpụta na ịgụ akwụkwọ eBooks ma ọ bụ akwụkwọ dijitalụ abụghị ihe ha.
Kedu ihe ị chere bụ eRead kacha mma enwere ike ịzụta na ahịa taa?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị ga-enweta eReader, gwa anyị ihe kpatara ị jiri họrọ ya na ọkachasị ihe kpatara dugara gị ịhọrọ eReader ahụ, ikekwe site na nke a ka anyị nwere ike ikpebi yana ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Ndị a bụ 5 nke kacha mma eReaders ị nwere ike ịzụta